के दुई चरणमा चुनाव सम्भव छ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
के दुई चरणमा चुनाव सम्भव छ ?
सत्तापक्ष र मधेशीदलको सहमति
सत्तापक्ष र मधेशीमोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनबीच संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने र स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सहमति भएुसंगै स्थानीय चुनावमा मधेशीदलको सहभागिता पनि सुनिश्चित भएको छ । संविधान संशोधनको खाका लिखित रुपमा तयार गरिए पनि सिंगो सहमति भने अलिखित रहेको र त्यसमा मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेकोे समर्थन भैनसकेकाले त्यसको पूर्णता भने बाँकी नै छ । तर चुुनाव हुने शर्तमा एमाले पनि सत्तापक्ष र मधेशीवीचको भद्र सहमति लागू गर्न तयार भएमा लामो समयदेखि अवरुद्ध राजनीतिले निकास पाउने ढोका भने खुुलेको छ । तीतो सत्य यही हो की एमाले सहितको ९ दलीय विपक्षी गठबन्धन भित्रबाट समर्थन नपाउँदा सम्म विधेयक पारित हुने सम्भावना माथि अझैं आशंकाका बादलहरु भने मडारिएकै छन ।
तथापि करिब दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुनलागेको बेला मोर्चाले चुनावमा आउन गरेको यो प्रतिवद्धता तुुलनात्मक रुपमा स्वागत योग्य देखिएको छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकायमा विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुननसकेको र अनियमितताले प्रोत्साहन पाएको तथा संघीय नेपालको पहिलो चुनाव हुनलागेका बेला यसले तमाम मतभिन्नताका वीच स्थानीय सरकार चयनको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस संगैदलहरु विगतमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार गठनमा उदासीन रहँदै आएको भन्ने आरोप पनि खण्डित हुदै गएको छ ।
द्विपक्षीय शीर्षस्थ बैठकमा एमाले पनि सामेल नगरिनुु सत्तापक्षको कमजोरी हो, भने मोर्चाको पनि भुुल नै रह्यो तर एमाले समेतको साथ रहेमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सकेसम्म आइतबार नै दुई चरणको निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने गरी भएको पछिल्लो सहमति चुनावको नयाँ निकास नै हो । अझ गठबन्धन र मोर्चाले आन्दोलन स्थगितगर्ने गरी भएको सहमति त स्थानीय चुुनावका लागि निकै सुखद उपलव्धी नै हो । किनभने मोर्चाले चुनावमा भागलिने शर्तमा सीमाँकन बाहेकका संविधान संसोधनमा लचिलो हुने एमालेले पनि बताउदै आएकोले अब एमाले पनि चुनावी सफलताका लागि सहयोगी बन्ने नै अपेक्षा जनताको छ ।
प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने सहमति होस वा संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर द्रुत मार्गबाट पारित गराउने, मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गर्ने र सरकारले दुई चरणको निर्वाचन घोषणा गर्ने सहमतिले अब देशलाई थप स्थानीय चुनावमयी बनाई दिएको छ । संघीय नेपालको स्थानीय सरकार गठनमा यो ठूलो युुगिन फड्को नै हो ।
जब मिले मधेशीदल
छ मधेशीदलको एकता नै नयाँ सहमतिको जगबन्यो । निश्चयनै वैशाख ७ बिहिबारको दिनमा ६ मधेशीदलको एकताले सबैभन्दा बढी खुसी मन्चमा आसिन छ जना पार्टीका अध्यक्ष नै देखिन्थे । अझ सबैभन्दा बढी खुसी देखिन्थे, सदस्य, सहयोग र शुुभेच्छुकहरु, हितैषीहरु, शुुभचिन्तकहरु । अनि त्यसले उनीहरुलाई चुनावमाजाने ग्राउण्ड तयार गर्यो ।
एकता घोषणा सभामा आफूहरु सबैलाई अंक छ को फलीफाप हुने थप सपनामा झुुम्दै गर्दा एकतावद्ध भएर अभिव्यक्ति पनि त्यही सिहसावले दिए । बाउले छोरा नमाने छोराले नी बाउ मान्नुुपने दरकार छैन भन्ने पूूर्व काँग्रेसी शरतसिंह भण्डारीको अभिव्यक्ति साँंकेतिक रुपमा रक्षामन्त्री हुदा तराईका २२ जिल्ला अलग गरि दिन्छुु भन्ने अहंकारकै पुनरावृत्त जस्तो देखिन्थ्यो । पूर्व एमाले महेन्द्र राय यादवले त नेपालको संविधान भारतले स्वीकारेकै छैन भन्दै गर्दा आफ्नो भारत भक्तिको श्लोकमा आफु भित्तामा पुगेको पत्तो पाएनन् । भीष्म पितामह भानिएका सन्त नेता महन्थ ठाकुरले टाईम बमको प्रसंग कोट्याएर बुुझाउन खोजेको अर्थ पनि उनको गर्विलो विगतको संघर्षगाथा र वर्तमानको राजनीतिक उचाई सुहाउदो थिएन नै । राजेन्द्र महतोको भावुकता होस वा राजकिशोर यादवको मादकतापूर्ण अभिव्यक्ति खुसीका फोहरा मात्रै होईनन, प्रतिशोधका पोका जस्ता पनि थिए ।
जे होस यो एकै डयांगका तर फरक फरक राजनीतिक पसल थापेका मधेशीदलको एकतायी छ दलको लागि नयाँ ईतिहास हो, शक्तिआर्जनको श्री गणेशसंगै सत्तापक्षसंग चुनावी सहमति गरेर नयाँ चुनावी तरंग ल्याएका छन । यसको खुसीयालीमा मधेशमा खुवाईएको मिठाई वा दीपावली आफैमा शुुभ संकेत हुन । कसैले पनि यो एकताबाट झस्किनुु पर्ने जरुरत छैन नै भन्ने मधेशीदलको नयाँ चुनावी सहकार्य नै हो । यो एकताबाट सबैभन्दा बढी खुसी स्वर्गवासी मधेश पितागजेन्द्र नारायण सिंहको आत्मा भयो होला । किनकीसप्तरीको त्यो मध्य सडक चोकमा उभिएको सिंहको त्यो अर्धकदको शालिक निर्जिव भएपनि उनको आत्माले यदि मधेशी राजनीतिको हिसावगर्दै थियो भने उसका लागि बिहिबारको एकता नै आफ्नाजीवन्त राजनीतिक संघर्षका अल्पबिरामहरु लाई पूर्णबिराम तिर डोर्याउने प्रारम्भ बिन्दुु थिए । अधुुरा सपना पुरा गर्ने नयाँ प्रण र प्रतिज्ञा नै हुनुुपर्छ यो एकता । त्यसैले बधाई ज्ञापन नै गरौं यो मधेशीदललाई फापेको अंक छ का नयाँ पार्टी एकताका लागि । नयाँ परिवेशमा नयाँ एकताकालागि । नयाँ शक्ति र गन्तव्य तयका लागि, भलै नभनौ नभनौ भन्दाभन्दै भन्नै कर लाग्ने तथ्य हरु छन नै ।
शंका छन तर पनि शुुभेच्छा राखौं
हो, यो एकतासंगै छरपष्ट तथ्यहरु पनि छन । नाम पनि मधेश शव्दबिनाको भारतीय जनता पार्टीसंग मिल्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी अर्थात राजपा । झण्डा पनि भारतीय संग ठ्याक्कै मेल खाने । रंगउस्तै, रचना र कोण र डिजाईन पनि उस्तै । कता कता भाजपाको नेपाली संस्करण जस्तो राजपा भनेर अरुले आरोप लाउनै पर्दैन, राजकिशोर यादव, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झाले मन्चबाट शीरमाथि फहराएको होईन, कम्मरमुनी झुकाएर फहराएको झन्डाले नै बताउछ । खासमा यो झण्डा र नाम भाजपाको फोटोकपी हुन जानुु संयोग मात्रै थिएन भन्ने त महेन्द्र यादव र शरत सिंहरुको वाणी र बानीले पनि स्पष्ट पारेकै छ ।
तथापि खोटभन्दा ज्यादा राम्रै कुरा हेरेर बधाई दिनुु पर्ने बेलाहो यो । किनभने यो एकतको बेलाहो । एकता त्यो पनि चाहे थ्रेस होल्डको थप्पडले होस वा एकता नै बल रैछ भन्ने फुटपरस्त २ दशक लामो चोटको चेतले होस । अथवा दक्षिणी वायुको प्रभावले नै किन नहोस सबै नाँग्ले पसल अब सुुपर मार्ट भएका छन । यसमा ग्राहक बढ्ने निश्चित छ । शक्ति त उसै बढेकै छ ।
राजपालाई भाजपाको नेपाली भर्सन भनेर भन्न नपरोस, लेख्ने, सुुन्ने, सुनाउने दिन नआउन । किनकी देश २० वर्षपछि संघीय नेपालको स्थानीय तह चुनावको मुखमा छ । अब मिलेका छ दल खुुरुक्क स्थानीय चुनावको महासमरमा होमिए भने उनीहरुलाई जति धन्यवाद दिएपनि अपुुग हुुन्छ । वधाई, धन्यवाद र शुुभकामनाहरुका साथ राजपालाई राजपा नै देख्न, भोग्न पाईयोस, भाजपाको नेपाली भर्सनको रुपमा चित्रण भन्न नपरोस ।
मधेशीबाट राष्ट्रिय हुने चेत ढिलै भएपनि आएकामा पनि यी एकतापन्थी नेताहरु बधाईका हकदार छन । मधेशलाई देश संझने र परदेश नबनाउने युुगिन चेतना पनि भारी वृद्धि होस यिनीहरुलाई । यिनीहरु अब विकल्प शक्ति बन्ने गरी बढ्दै, झांगिदै जाउन र सत्तामा खाँटी नेपाली दलबनेर पुुग्न सकुन । नयाँ फुटको लागि जग होईन मधेशभित्रको देशलाई सिंहदरवारसंग र सिंहदरवारलाई देशभित्रको मधेशसंग जोड्ने सेतुुपात्र राजपा बनोस । नायक छ दलीय एकताका पक्षधर नेताहरु बन्न सकुन । उनीहरु राजपा नै बनुुन भाजपा जस्ता हुुदै नहोउन । अनि नयाँ राजपा वैशाख ३१ को स्थानीय सरकार छान्ने चुनावमा पहिलो दलबन्ने गरी चुनावी खालमा अब्बल बनोस, भनौ सबैले वधाई र शुुभकामना राजपा । राजपाले बोकेको दलीय चुनाव चिन्ह छाता क्षेत्रीय, संकीर्णवादीहरुको मात्रै ओत लाग्ने वा दक्षिणी दक्षिणा र मन्त्रणका आत्माहरुको घुम होईन हिमाल, पहाड , तराईका सबै नेपालीको सच्चा छाता बन्न सकोस ।